Ibsa Gabaabaa Labsii Warraana Mootummaan Wayyaanee Uummata Oromoo Irratti Labsee – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Gabaabaa Labsii Warraana Mootummaan Wayyaanee Uummata Oromoo Irratti Labsee
Ibsa Gabaabaa Labsii Warraana Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF Uummata Oromoo Irratti Labsee Raggasiisuuf jiru Mormuu ilaalchisuun Kenname!!
Mootummaan abbaa irree wayyaanee sirni EPRDF qabsoo warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXGn burkutaa’ee kufaa jiru afaan qawween of dandamachiisuufi yakka duguuginsa Sanyii (Genocide) caalaatti itti fufsiisuuf waraana kallattiin uummata Oromoofi guutummaa biyyatti irratti labsaa jiru raggaasifatee bulchiinsa biyyatti baatii jaahaa oliif komandi Posti jala galchaa jiraachuun hubatameera.
Labsii waraanaa amma labsaa jiruun bulchiinsa sirnicha duraan maqaaf jiru guutummaatti waraana jala galchuun mirga namummaa, mirgoota dimookiraasiifi yakka duguuginsa sanyii itti fufinsaan gaggeessuuf kan adeema jiran ta’uun beekamaadha. Labsiin waraanaa kun uummata keenyarraatti akka hin raggasifamneef bakkaa jirruu hundaa balaaleffachuufi dhiibban barbaachisuu akka godhamuuf Qeerroon Bilisummaa Waamicha lammummaa uummata Oromoofi Lammiilee biyyaatti hundaaf dabarsa.
Abbootiin amantaa, abbootiin Gadaa, jaarsolii biyyaa, Abbootiin qabeenyaafi uummaatni biyyaatti hundii labsiin waraanaa kun dhiiga uummata keenyaa dhangalaasuu, yakka sammichaafi yakkaa ajjeechaa duguuginsa sanyii (Genocide) ittin uummata keenyarratti rawwachuufi guutummaatti mirga uumamaafi mirgoota dimookiraasii uummaatni qabu hundaa uggura waan ta’eef bakka jirtaan hundaa nu cina dhaabbattani balaaleffachuun akka fashalaa’uuf waamicha keenya dabarsina!!
Jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo hundiifi jaarmiyaaleen Siyaasaa biyyatti Bilisummaafi kabajamuu mirgoota dimookiraasii saba keessaniif qabsooftan hundi bakka jirtan hundaatti labsiin waraanaa uummata biyyaatti addattimmoo uummata Oromoo irratti labsame kun akka hin raggaasifamneef kallattii hundaan irratti hojjechuun Sagaalee uummata keenyaa taa’uun akka fashaleessinuuf waamicha dabarsina!!
Miseensootni Paarlaamaa biyyattii labsiin muddamaa kun akka raggaasifamuuf walitti qabamuuf adeemaa jirtan , Sagalee keessanii yaakka duguuggaa Sanyii uummata irraa dhalattaniifi keessaa baataan irraati raggaasisuun mirgoota namummaafi dimookiraasii guutummaatti uummatarraa mulquuf waan jirtaniif labsiin waraanaa akka hin raggaasifamne dura akka dhaabbaattan waamicha dabarsina. Labsiin waraanaa kun yoo raggasifame yakkoota waraanaan rawwatama turaniifi rawwatamuuf jiraniif itti gaafatama seeraafi seenaa keessa kan hin baane ta’uu isin hubachiifna!!
Miseensootni Caffee Oromiyaafi Manni Maree Caffee Odaan Shan Oromiyaa labsii Waraanaa uummata keenyaarratti labsamee jiru jiru sagalee guutuun akka mormuu waamicha dabarsina, Labsiin waraanaa kun yoo raggasifame yakkoota waraanaan rawwatama turaniifi rawwatamuuf jiraniif itti gaafatama seeraafi seenaa keessa kan hin baane ta’uu isin hubachiifna!!
Ilmaan Oromoofi ilmaan Saboota Cunqurfamoo waraana Mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF keessatti argamtan labsiin kun nageenya biyyaa kabachiisuuf utuu hin ta’iin dantaa dhaaba Siyaasaa ADWUI /EPRDF qofaa kufaatii irraa dandamachisuuf yakka waraanaa uummata keenyaa irratti labsame ta’uu hubachuun qajeelfamaafi ajaja isiniif kennamaa jiruu kufaa gochuun uummaata irraa dhalattan cina dhaabbaachuun gaaffiin bilisummaafi mirga abbaa biyyummaaf deebiin akka kennamuuf dirqama lammummaafi biyyummaa bakka jirtanitti akka bahattan waamicha keenya dabarsina!!
#HUBACHIISA: Qabsoon Bilisummaa Oromoo hanga uummatni Oromoo bilisoomuufi Oromiyaan walaboomtuufi (Uummatni keenya of danda’ee mirga hiree isaa ofiin murteeffatutti) humna waraanaafi afaan qawween kan dhaabbatu miti!!
Labsiin waraanaa kun yoo raggasifamee hojiirra kan oluu ta’ee tarsiimoo warraaqsi Biyyoolessa Oromiyaa FXG hordofuu qabufi ittin dura dhaabbatnee falmaannee Bilisummaa keenyaafi walabummaa biyya keenyaa gonfannu waan qabnuuf Qeerroon dargaggootni Oromoo, Uummaatni Oromoo hundiifi jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo hundi bakka jirtanitti qophii, dammaqinsa, tokkummaafi walhubannoo akka jabeessitan Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaamsaa dabarseera!!
Hoogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!
Lola uummata Oromoo Walloo irratti baname ilaalchisee ibsa ABO ﻿ ﻿
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Gurraandhala 20, 2018